Accueil > Gazetin'ny nosy > Ravalomanana : Omen’ny mpitondra sasany vahana
Midingin-drambo mihitsy Ingahy Ravalomanana amin’izao fotoana, ka mitety faritra, mba hanambarany ny tsy fahombiazan’ny fitantanan-draharaham-panjakana. Ny akon’izany tsy fahombiazana izany any amin’ny vahoaka izay mihombo fahasahiranana no lalaovin-dRavalomanaa. Aoka dia tsorina fa ny fitavozavozan’ny mpitondra sasany sy ny tsy fananan’ny mpitondra sasany foto-kevitra matotra sady mafonja ho amin’ny fitantanan-drahatraham-panjakana, indrindra fa ny famahana ny olana fototry ny ambanilanitra dia manome vahana sy zary mampahazo rariny sadasada an-dRavalomanana.
Io olana ara-tsosialy amin’izao fotoana io, na inona fanazavana na inona fanehoan-kevitra dia tsy zakan’ny ambanilanitra. Ary rehefa tsy zakany io dia misintaka tsikelikely amin’ny mpitondra ny fanantenany. Rehefa mitranga izany dia tsy hilaozan’izay tsy ho voasariky ny safosioka ataon-dRavalomanana amin’ny asa fanoherana entiny mandrebireby ny tso-bavy sy tso-dahy.
Raha manao fanadihadiana aloha isika dia tsy hoe tena loza mitatao ho an’ny fitondrana ankehitriny eo amin’ny fifaninanana politika Ingahy Ravalomanana fa ny tsy azo tsinontsinoavina, dia ho mora ho an’ny mpifaninana “hiseho tampoka” eo ny hambabo ny fon’ny olon-tsotra izay maro an’isa amin’izay raharaha politika izay.
Aza variana amin’ny fanerena ny olona hanaiky ny ataonareo eo amin’ny fitondrana ianareo fa mba henoy ny hetahetam-bahoaka, mba fantaro ny mampanahirana ny ambanilanitra, mba hadihadio ny olana mamatotra ny maro dia vahao sy karakarao ary hamaivano ny fahanatrany.
Raha mbola manan-kevitra hanohy hitondra firenena sy hitantana raharaham-panjakana ihany dia mahaiza mitsinjo lavitra nefa aza varimbarian’ny lavitra koa ka tsy mahita ny ambany maso fa manjary manome vahana ny efa naloam-bahoaka.